Shopping mall factory and suppliers | Radiant
+86 755 83193425
Screen Transparent LED
Poster Transparent LED
Screen Creative LED
Customized LED Screen
Casino Led Screen
Shelf LED Screen
Station & Airport
Casino and Gaming Industry
Boodhkan Transparent LED
Damaanad / Service
Large-format screens LED waa qayb muhiim ah Out Digital ee muuqaalka Home
Waxay bixiyaan dabacsan, boosteejo ah oo digital in ay keenaan noocyada nolosha iyo xirmaan xayeysiiya macaamiisha ku hay-dhigay ku haboon in ay iibsadaan.
Waxaa jira tiro ka mid ah fursadaha u furan goobaha doonaya in ay ku rakibi screen ah LED iyo qaar badan oo macaamiisha ADI ayaa doortay model ah ee lahaanshaha screen.
lahaanshaha Screen bixisaa kiis kalifaya faa'iido dhaqaale muddo-dheer iyo meelaha goobaha tafaariiqda iyo milkiilayaasha ay u meel ganacsi oo xoog leh halkaasoo ay heshiisyo warbaahinta iyo dakhliga advertising ka welwelsan tahay. Iyada oo kharashka hardware screen ma tahay aan qiimo lahayn, faa'iidooyinka ku riyaaqay by macaamiisha marka ay sheeg iyo iibsadaan iyaga u gaar ah screen warbaahinta LED waa kala gaarey. Dad badan ayaa ka rabta qiimaha ay screen muddo 12-18 bilood gudahood.
Isagoo intaa ku daray ah il dakhli dheeraad ah
Iibinta meel advertising on your Shopping Center Screen LED noqon kartaa il dakhli weyn. Shabaqa LED leeyihiin awood u leh in ay muujiyaan xayaysiisyada badan oggolaadaan in aad iibiso share dhiman, oo wali waxay haystaan ​​qalab ee ololaha adiga kuu gaar ah. Shabaqa Feature Format waaweyn ee xarumaha wax laga gato yihiin goobaha gaadiidka sare oo u dhowow badan oo indhaha taasi ka dhigan tahay binta premium for meel advertising ah.
Isuna kiraystayaasha more
Haddii kireystayaasha laga yaabo in aad dooranayso dhexeeya xarumaha wax laga gato badan Format ah Large LED Screen ee xarunta dhigi kartaa faraqa u. On top of image waxaa soo bandhigaysaa, awood u leh inay suuqa ka iman kara aad dukaanka ee xarunta waxaa ku yaalla waxay bixisaa fursad weyn. Isagoo intaa ku daray qayb ah muddo gaaban free of bandhigay ayaa sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa si aad u hesho kiraystayaasha iman kara xariiqda
Post time: Mar-28-2019
Transparent LED screen is expected to bec...
Transparent LED screen market is graduall...
It is said that the transparent LED scree...
What is the future development direction ...
Is the LED transparent screen promising i...
Wax soo baara Waayo Pricelist
Floor 2, Lilan Technology Building, West Area, Hi-Tech Zone, Guangming district, Shenzhen, China
hadda na soo wac: +86 755 83193425